Khamiis, Nofeembar 24, 2016 -
7:00 subaxnimo ku 10:00 subaxnimo
Ma haysataa waxa ay qaadato si aad u noqoto Halgamayaal Gaajada u ah Cunnooyinka Baabuurta? Hadday sidaas tahay, nagu soo biir Thanksgiving -ka Mall of America ee loogu talagalay Soco si Aad u Dhamayso Gaajada!
Socdaalka Dhammaadka Gaajada waa hab madadaalo leh oo dadka daneeya arrimaha gaajada ee Magaalooyinka Mataanaha ah ay isugu yimaadaan oo ay soo celiyaan inta aysan mahadin. Markaad ballan -qaaddo inaad u socoto Cunnooyinka Gawaarida, waxaad samayn kartaa qaybtaada si aad u hubiso in kumanaan waayeel ah oo ku nool aagga metro ee Twin Cities ay helaan cuntada caafimaadka leh iyo is -dhexgalka aadanaha ee ay u baahan yihiin si ay ugu sii noolaadaan guriga.
Laba siyaabood ayaad uga qaybgeli kartaa Socodka Lugaynta Dhammaadka:
Nala soco! Qof kasta ayaa iska diiwaangelin kara sidii socod -haye ku biir kooxda Metro Meals on Wheels oo kaliya waxay qaadataa waa deeq $25 si loo bilaabo. Waxaad markaa dejin kartaa hadaf lacag aruurin oo adiga kugu habboon.
Ku deeq kooxda Cuntada ee Guri -giijiska! Haddii aadan gaari karin suuqa weyn ee Thanksgiving, weli waad na caawin kartaa ugu deeqay kooxdayada.
Waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo biirto Mall of America on Nov. 24!